के शी’घ्रस्ख’लनका कारण याै’नसाथी अ’सन्तुष्ट छिन् ? गर्नुहोस यी २ बिधि ! - नेपाली खोज
अ’र्गाज्म प्राप्त हुने अवस्थाभन्दा पहिले यौ’नस’म्पर्क १ मिनेट पनि टिकेन भने त्यसलाई शी’घ्रस्ख’लनको अवस्था भनेर परिभाषित यौ’न चाहाना शारि’रीक चाहाना हो । चाहाना हुँदा हुँदै र यौ’न चा’हाना पुरा गर्ने साथी हुँदा हुँदै पनि कहिले काहिँ शी’घ्रस्ख’लनको समस्याले त्यो चा’हाना पुरा गर्न समस्या हुन्छ । शी’घ्रस्ख’लन धेरैजसो पुरुषलाई हुने समस्या हो । एकतिहाइ पुरुषले १८ देखि ५९ को उमेरभित्र यस्तो समस्या भोग्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार आफ्नो यौ’नसा’थीसँगको यौ’न स’म्पर्कलाई लम्ब्याउन चाहँदा–चाहँदै पनि शी’घ्रस्खलन हुने गरेको छ । यो कुनै वंशानुगत बिरामी होइन, तर जसले यसको सामना गरेको हुन्छ उसलाई निकै त’नाव हुन्छ र पार्टनरको छट्प’टी हेर्न निकै गाह्रो हुन्छ ।
चर’म अवस्थामा पुग्न लाग्दा पार्टनरमध्ये एक जनाले लि’ङ्गको टु’प्पो समाउने र शी’घ्रस्ख’लन रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यो विधिलाई पनि केही समय दोर्होयाउने यसका लागि सजिला उपायहरू पनि छन ।
स्टप स्टार्ट टेक्निक वा थेरापी
यौ’न आ’नन्दको च’रम अवस्थालाई लम्ब्याउन वा शी’घ्रस्ख’लन रोक्न प्रस्तावित केही विधि पनि छन । जस्तो कि शी’घ्रस्ख’लन केही समय रोक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण बिधि हो । यसलाई स्टप स्टार्ट टेक्निक वा थेरापी भनिन्छ ।
यो विधिलाई युरोलोजिस्ट डाक्टर सिमेनले सिफारिस गरेका हुन । यो टेक्निकमा दुवै पार्टनरको सहभागिता हुनुपर्छ । यसअन्तर्गत लिं’ग उत्ते’जना हुन लागेको समयमा केही क्षण स’म्पर्क रोक्ने अनि फेरि स’म्पर्क गर्ने र त्यसलाई केही समय दोर्होयाउने । बढी संवे’दनशील भागतर्फभन्दा कम संवे’दनशील भागतर्फ सम्पर्क गरेर पनि केही समयका लागि शी’घ्रस्ख’लनलाई रोक्न सकिन्छ । यसले लिं’गको स्ख’लित हुने संवेदनशीलतालाई न्यून गर्छ । यसरी अभ्यास गर्दा कतिपय पुरुषको शी’घ्रस्ख’लन रोक्न सक्ने क्षमता विकसित हुन्छ ।
अर्को विधिलाई स्कुइज टेक्निक भनिन्छ । यसअन्तर्गत अर्गाज्म अर्थात् चर’म अवस्थामा पुग्न लाग्दा पार्टनरमध्ये एक जनाले लि’ङ्गको टु’प्पो स’माउने र शी’घ्रस्ख’लन रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यो विधिलाई पनि केही समय दोर्होयाउने अनि मात्र स्ख’लन गराउने ।
कतिपय पुरुषले यसलाई प्रभावकारी भएको माने पनि कतिपयका लागि यो प्रभावकारी नहुन सक्छ, त्यसैले उनीहरूले थप उपचारमा ध्यान र्पुयाउनुपर्छ । यौ’न एउटा र’हस्यमय विषय भएकाले यसका बारेमा थुप्रै अध्ययन भएका छन् । स्ख’लनका लागि आवश्यक समयावधिका बारेमा पनि थुप्रै अध्ययन भएका छन् ।
अध्ययनहरूले देखाएअनुसार आनन्दको चर’म अवस्थामा पुग्नुअघिको समयावघि औसतमा ३ देखि ७ मिनट हुनु आवश्यक छ । केहीमा ७ देखि १३ मिनटसम्म लम्बिने गरेको छ, तर चर’म आनन्दको अवस्थामा नपुग्दै अर्थात् अ’र्गाज्म प्राप्त हुने अवस्थाभन्दा पहिले यौ’नस’म्पर्क १ मिनेट पनि टिकेन भने त्यसलाई शी’घ्रस्ख’लनको अवस्था भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
शी’घस्ख’लनको व्यवहारजन्य एवं मनोवैज्ञानिक कारणचाहिँ यौ’नका विषयमा कम ज्ञान, यौ’न सम्प’र्कका बेला दिमागमा आउने चिन्ता तथा अन्य गल’त सोच र बिभिन्न किसिमका ड’रत्रा’सजन्य कुरा जिम्मेवार रहने गरेका छन् । अस्वीकृत यौ’नस’म्बन्ध, पर’स्त्रीगमन, केही क्षण अगाडिको ह’स्तमै’थुनबाट संवे’दनशील अवस्थामा पुगेका यौ’न अं’गहरू, एकान्तपनको अभाव वा सामाजिक बन्धनका सीमाबाहिर जाँदा हुने विभिन्न किसिमका ड’र–त्रा’सका कारण यौ’नमा चुर्लु’म्म डु’ब्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।
धेरैजसो पुरुषको जीवनमा कहीं न कहीं कुनै न कुनै बेला शी’घ्रस्ख’लनको अवस्था
यस्तो बेला शी’घ्रस्ख’लन हुन सक्छ । यौ’न अं’ग बढी नै संवेदनशील भए पनि यस्तो अवस्था आउँछ, तर यो विस्तृत अध्ययन (अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको तथ्य भने होइन । अध्येताहरू यसमा नयाँ कुरा पत्ता लगाउन लागिपरेका छन ्। त्यस्तै टेस्टोस्टेरोन हा’र्मोन बढी हुँदा पनि यस्तो स्थिति आउने तथ्यहरूले देखाएका छन । म’धुमेहका रोगीहरूमध्ये केहीमा यौ’नांग उ’त्तेजित कम मात्रामा हुने कारणले गर्दा पनि शी’घ्रस्ख’लन हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन ।
हाइ’परथाइरोइडिज्म तथा शी’घ्रस्ख’लनको पनि सम्बन्ध छ । हाइ’परथाइरोइडिज्म भएका ७२ प्रतिशत मानिस शी’घ्रस्ख’लनबाट पी’डित हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसका लागि भने चि’कित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ । यौ’नस’म्पर्क एउटा तहमा पुगेपछि स्ख’लन आवश्यक छ । दुवै जनालाई सन्तुष्टिको समान उचाइ प्राप्त हुँदा नै स्ख’लनको अवस्था आउँछ । सामान्य रूपमा भन्दा दुवैलाई यौ’न स’न्तुष्टिको चर’म अवस्थामा पुग्दा खास समस्या पनि आउँदैन, तर धेरैजसो पुरुषको जीवनमा कहीं न कहीं कुनै न कुनै बेला शी’घ्रस्ख’लनको अवस्था आउँछ ।
त्यतिबेला भने महिलालाई केही अस’न्तुष्टि महसुस हुनु स्वाभाविक हो । खासमा शी’घ्रस्ख’लनले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि यौ’न अ’सन्तुष्टि भैरहेको हुन्छ । तपाईंको सन्दर्भमा यदि धेरै उपाय अपनाउँदा पनि समस्या हल नभएको हो भने त्यो म’नोवैज्ञानिक समस्या हुन सक्छ, त्यसैले मनोविद् वा म’नोचिकित्सकसँग भेटेर थप उपचार खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।
खोटाङमा घरायसी विवादमा श्रीमानको कुटाइबाट घाइते श्रीमतीको मृत्यु
१२ वर्षीया छोरी बला;त्कार कसुरमा बाबुलाई जन्मकैद सजाय